Soomaali lagu xiray Denmark - BBC Somali
Soomaali lagu xiray Denmark
29 Maajo 2012
Image caption Ciidamada booliiska Denmark
Booliiska nabadsugida ee Denmark waxa ay sheegeen in labada walaalaha ah ee ay qabteen ay mid ku xireen gurigiisa oo ku yaalla magaalada Aarhus, halka mid ka kalena la xiray isaga oo diyaarad kaga soo degay garoonka Copenhagen Isniintii.
Xarriga labadan Soomaalida ah ayaa waxa iska kaashaday ciidamada ammaanka Denmark iyo hey'adaha sirdonka, kuwaasi oo sheegay in looga shakiyay labada nin inay diyaarinayeen ficil aragagxiso ah, isla markaana ay ka waa hadleen meelo ay bartilmaamdeesan lahaayeen., qaabka ay u gali lahaayeen iyo hubka ay isticmaalayaan.
Mid ka mid ah walaalaha ayaa waa lagu eedeeyay in uu tababar kula soo qaatay kooxda islaamiga ee Soomaaliya ee alshabaab, xero ku taala Soomaaliya.
Waxa la horkeeni doonaa raggan Soomaalida ah maxkamadda maanta.
Dadka arrimaha la socda ayaa sheegay in Denmark ay bartilmaameed u noqotay kooxaha argagaxisada ee Islaamiyiinta ah sanadihii ugu dambeeyay, sababtuna ay tahay ku lug lahaanshaha ciidamada Denmark ay qeybta ka yihiin Dagaalada Ciraaq iiyo Afghanistan, iyo weliba sawirro gacmeedyo wargeys ka soo baxa dalka Denmark uu soo saaray kuwaasi oo ay aad uga carroodeen muslimiinta oo ay wax kaga sheegeen nabi muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee.